Thursday July 12, 2018 - 22:09:47 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Liibiya ayaa sheegaya in maanta uu geeriyooday wiilka kaliya ee uu dhalay halgamaagii mujaahidka ahaa ee Sheekh Cumar Al-mukhtaar.
Magaalada Banghazi ee Bariga Liibiya ayaa maanta gelinkii dambe lagu aasay allaha unaxariistee Sheekh Maxamed Amiin Cumar Al Mukhtaar oo ahaa wiilka hoggaamiyihii gummeystaha Talyaaniga kula dagaallamay Liibiya.
Max'med Amiin ayaa ahaa 97 sana jir bishii March 2018 ayuu sheekhu udhoofay dibadda si halkaas loogusoo daweeyo, wariyaal Liibiya ku sugan ayaa baraha bulshada ku faafiyay warkan ku saabsan geerida wiilka Cumar Almukhtaar.
Sheekh Cumar Almukhtaar ayaa taariikh dahabi ah ku leh Jihaadka qaaradda Afrika gaar ahaan mandiqadda Maqribul islaam halkaas oo uu kula dagaallamay ciidamada gumeysiga Talyaaniga.
Wuxuu ka tagay hal ku dhig illaa iyo hadda waaray markii ay daldalayeen saraakiishii gaalada isagoo taagan halkii lagu dilayay ayuu cadowga usheegay in istish-haadkiisa uu dhiiri gelin unoqonayo muslimiinta.
Ciidamada Dowladda Oo Wiil Dhalinyara ah ku dilay Magaalada Marka.